SIP Awards 2020 | Victory Myanmar Group Co., Ltd.
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အခြေစိုက် SIP Awards ယမကာပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Mandalay Export Rum က SIP Awards 2020 (Platinum) ပလက်တီနမ်တံဆိပ်တစ်ခုနဲ့ Mandalay White Rum က SIP Awards 2020 (Double Gold) နှစ်ထပ်ကွမ်း ရွှေတံဆိပ်တစ်ခု ထပ်မံ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကို နိုင်ငံတကာက ယမကာအမှတ်တံဆိပ် (၈၀၀) ကျော် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Mandalay Export Rum နဲ့ Mandalay White Rum တို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြန်မာ့ကိုယ်စားပြု ဂုဏ်ယူစရာ ဆုတံဆိပ်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
SIP က ပေးအပ်တဲ့ ပလက်တီနမ်ဆုတံဆိပ်ဟာဆိုရင် ဒိုင်လူကြီးများက ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ အဆင့်အတန်းမီ ယမကာအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးအပ်တာဖြစ်ပြီး နှစ်ထပ်ကွမ်းရွှေတံဆိပ်ဆုကတော့ သောက်ပြီးတဲ့အခါ အနံ့အရသာရဲ့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်မှုကို သတ်မှတ်ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
Mandalay Export Rum wonaSIP Awards 2020 (Platinum) medal and Mandalay White Rum wonaSIP Awards 2020 (Double Gold) gold medal at the California-based SIP Awards.
The competition was attended by over 800 international Spirits brands, and Mandalay Export Rum and Mandalay White Rum were able to bring proud titles for Myanmar.
The consumer judges recognize the SIP Platinum Award asadistinguished class that earned exceptional marks and the Double Gold Award as the completeness of the aroma and taste after drinking.